स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, ३ भदौ २०७५) | गृहपृष्ठ
Home लगानी स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, ३ भदौ २०७५)
on: ३ भाद्र २०७५, आईतवार ११:०१ लगानी
स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, ३ भदौ २०७५)
लघुवित्तको नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा भोजराज बस्याललाई नियुक्त गरिएको छ । नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गत चैत्र १९ गतेबाट आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन् ।
लघुवित्तको खुद नाफा ३४ करोड ६४ लाख पुगेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा नाफा ३१ प्रतिशत वृद्धि हो ।
खुद मुनाफामा आएको सुधारसँगै लघुवित्तको प्रतिशेयर आम्दानीमा वृद्धि भएको छ । गतवर्षको यसै अवधिमा ५२ रुपैयाँ ५३ पैसा रहेको प्रतिशेयर आम्दानी अहिले ६८ रुपैयाँ ८६ पैसा छ ।
लघुवित्तको जगेडा कोषमा ६० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । ५० करोड चुक्तापूँजी भएको लघुवित्तको जगेडा कोषमा ९२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ हुनुले पनि लघुवित्त यो अर्थमा निकै राम्रो छ ।
लघुवित्तको सापटी रकम ३ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह २६ प्रतिशत बढेर १० अर्ब १५ करोड पुगेको छ । त्यस्तै, लघुवित्तले ५ अर्ब ७६ करोड निक्षेप सङ्कलन गरेको छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ३६ प्रतिशत बढी हो ।
लघुवित्तको प्रमुख आम्दानीको स्रोतमा रहेको खुद ब्याज आम्दानी भने ९ प्रतिशत कम भएको छ । लघुवित्तले ८६ करोड ६७ लाख खुद ब्याज आम्दानीबापत कमाउन सफल भएको छ । यसमध्ये कम्पनीले ५ करोड ५ लाख रुपैयाँ प्रोभिजन गरेको छ भने जोखीम कोषबाट यो वर्ष रकम फिर्ता गरेको छैन ।
लघुवित्तको निष्क्रिय कर्जाको अनुपातमा यस अवधिमा वृद्धि भएर १ दशमलव ०२ प्रतिशत पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा शून्य दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै, लघुवित्तले निष्कृय कर्जाका लागि १६५ दशमलव १४ प्रतिशत रकम प्रोभिजन गरेको छ ।
यस अवधिमा लघुवित्तको कोषको लागत ७ दशमलव ०८ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर ८ दशमलव ७८ प्रतिशत पुगेको छ ।
लघुवित्तले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणअनुसार प्रतिशेयर नेटवर्थ २८४ रुपैयाँ शून्य ५ पैसा, प्रतिशेयर कुल सम्पत्ति २ हजार ३ सय ५९ रुपैयाँ, तरलता अनुपात १२ प्रतिशत छ ।
समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानीमा कमी आए पनि अन्य सञ्चालन आम्दानी शीर्षकमा भएको आम्दानीमा व्यापक मात्रामा वृद्धि हुँदा समग्रमा खुद मुनाफामा ३१ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ । साथै, सोही अवधिमा प्रतिशेयर आम्दानीमा वृद्धि गर्न सक्नु लघुवित्तको सबल पक्ष रहेको छ । यद्यपि, खुद ब्याज आम्दानीमा आएको कमी र बढ्दो प्रोभिजनको रकमलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती लघुवित्तको व्यवस्थापनसमक्ष रहेको छ ।
प्राविधिक विश्लेषण : टेवाक्षेत्रबाट बढ्दै स्वावलम्बन विकास बैङ्क
प्रतिरोध २ : १४४० । प्रतिरोध १ : १३०० । अन्तिम कारोबार मूल्य : १२४७ । टेवा १ : १२०० । टेवा २ : ११७५
२ महीनायता स्वावलम्बन विकास बैङ्कको शेयरमूल्य प्रवृत्तिहीन अवस्थामा छ । बिहीवार स्वावलम्बन विकास बैङ्कको शेयरमूल्य १८ रुपैयाँ अर्थात् १ दशमलव ४२ प्रतिशत घटेर १ हजार २ सय ४७ मा बन्द भएको छ भने १ हजार ५ सय ९१ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । शेयरमूल्य उच्चतम रू. १ हजार २ सय ६४ देखि न्यूनतम रू. १ हजार २ सय २५ सम्म कायम छ ।
२० दिने मुभिङ एभरेजअनुसार स्वावलम्बन विकास बैङ्कको शेयरमूल्य बढ्दो प्रवृत्तिमा छ ।
एटीआर सूचक प्रवृत्तिहीन अवस्थामा छ । यसले यस कम्पनीको शेयरमूल्यमा उतारचढाव सामान्य रहेको सङ्केत गरेको छ ।
ओबीभी सूचक केही दिनयता बढ्दो प्रवृत्तिमा छ । यसले शेयरमूल्य र कारोबारअनुसार बजार केही सकारात्मक हुँदै गएको सङ्केत गरेको छ ।
स्टोकाष्टिक सूचक ओभरबठ क्षेत्रनजीक रहेकाले खरीदकर्ताको चाप बढ्दै गएको सङ्केत गरेको छ ।
विभिन्न प्राविधिक सूचकले यस कम्पनीको शेयरमूल्यबारे मिश्रित धारणा व्यक्त गरेकाले प्रष्ट सङ्केत नगरेसम्म ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अपनाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।
१० चैत्र २०७५, आईतवार ०९:४२
स्वावलम्बन लघुवित्तद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
२० पुष २०७५, शुक्रबार ०५:३७
स्वावलम्बन लघुवित्त : मैनबत्ती विश्लेषण (आइतवार, १४ असोज २०७५)
१४ आश्विन २०७५, आईतवार ०९:५४
स्वावलम्बन लघुवित्तको नाफा ३१ प्रतिशतले वृद्धि
२२ श्रावण २०७५, मंगलवार १२:३६